China Eastern ụgbọ elu ga -anabata 2022 IATA AGM na Shanghai
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » China Eastern ụgbọ elu ga -anabata 2022 IATA AGM na Shanghai
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
A ga-enwe nzukọ izugbe nke iri asaa na asaa nke IATA (AGM) na nzukọ ụgbọ elu ụgbọ elu ụwa na Shanghai, Republic of China, na June 78-19, 21.
Nke a ga -abụ ugboro atọ ndị China ga -anabata ọgbakọ zuru ụwa ọnụ nke ndị isi ụgbọ elu.
China Eastern ụgbọ elu nwere obi ụtọ ịnabata IATA AGM yana ịnabata ndị ọrụ ibe anyị n'obodo Shanghai.
Mkpebi ịnabata nzukọ izugbe nke iri asaa na asaa nke IATA na nzukọ ụgbọ elu ụwa bụ nke 78th AGM na Summit Transportgbọ elu ụwa na Boston mere.
Ndị otu ụgbọ njem mba ụwa (IATA) kwupụtara na China Eastern Airlines ga-akwado nzukọ 78th IATA Kwa Afọ General (AGM) na World Air Transport Summit na Shanghai, Republic of China, na 19-21 June 2022.
Nke a ga -abụ ugboro atọ ndị China ga -anabata ọgbakọ zuru ụwa ọnụ nke ndị isi ụgbọ elu. Emere AGM na mbụ na Beijing na 2012 yana Shanghai na 2002.
“Anyị na -atụ anya ịchịkọta ụlọ ọrụ ụgbọ elu na Shanghai maka 78th obodo ntà AGM. China bụ ahịa ụgbọ elu na-agbanwe agbanwe, yana njem ime ụlọ ya n'etiti ndị kacha agbake site na mbibi COVID-19 wetara. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ike ibubata AGM na China ọzọ, "Willie Walsh, onye isi oche IATA kwuru.
"China Eastern Airlines nwere obi ụtọ ịnabata IATA AGM na ịnabata ndị ọrụ ibe anyị n'obodo Shanghai. N'ime afọ 20 kemgbe emechara AGM na Shanghai, obodo agbanweela kpamkpam. Anyị na -atụ anya igosi obodo anyị mara mma na ile ọbịa China na -ekpo ọkụ, "Liu Shaoyong, Onye isi oche kwuru. China Eastern Airlines.
Mkpebi ịnabata 78th obodo ntà Nzukọ ọgbakọ kwa afọ na nzukọ ụgbọ elu ụwa bụ nke 77th AGM na Summit Transportgbọ elu ụwa na Boston mere.